Oprah sy 1971 Apple TV + Show Win Critics Choice Real TV Awards | Avy amin'ny mac aho
Seho an'i Oprah sy ny fahitalavitra Apple TV tamin'ny taona 1971
Ny Apple TV + dia mampiseho ny "The Oprah Interviews" sy ny "1971: The Year Music Changed everything" dia nahazo loka tamin'ny loka Kritika tena safidy TV. Ny Critics Choice Real TV Awards dia manaiky ny hatsaran'ny zava-misy, ny tsy foronina ary ny fandaharana fandaharana tsy misy soratra any Etazonia. Ho an'ny 2021, ny loka fahatelo isan-taona dia nisafidy seho Apple TV + roa ho mpandresy amin'ny sokajy misy azy ireo.
Ny fampisehoana Oprah dia nifamatotra tamin'ny laharana voalohany tamin'ny "Diners, Drive-ins ary Dives »avy amin'ny Network Network ao amin'ny sokajy S Series Structured tsara indrindra. Ny sasany tamin'io sokajy io dia "A World of Calm" ao amin'ny HBO Max, "History of Bad Words" ary "Queer Eye" ao amin'ny Netflix. Ilay Oprah Winfrey mahatalanjona koa dia notendrena ho Best Program Host, saingy resin'i John Oliver noho ny "Last Week Tonight."
1971: ny taona nanova ny zava-drehetra ny mozika no hany nandresy ao amin'ny sokajy Best Series Documentary voafetra. Nandresy tamin'ny HBO's "I'll Be Gone in the Dark" sy "Murder on Middle Beach," Netflix's "Modify: The Fight for America," ary ny Disney's's "Secrets of the Whales."
Apple TV + dia nomem-boninahitra ihany koa mba hanana seho iray voatondro amin'ny loka, miaraka amin'i "Ry malala" amin'ny hazakazaka ho an'ny Best Documentary Series andiany. Ny sokajy dia nandresy tamin'ny "Frontline" an'ny PBS. Ny Critics Choice Real TV Awards dia tsy ny voninahitra tokana omena ny seho Apple TV +. "Ted Lasso" dia nahazo loka Peabody noho ny "optimisme mahery vaika."
Vaovao tena tsara ho an'i Apple ary indrindra ho an'ny fizarana amin'ny fahitalavitra. Ny loka marobe dia midika zava-bita lehibe kokoa ary fahafantarana fa tsara ny ataonao, eo amin'ny làlana tsara ho an'ny besinimaro sy ny mpitsikera. Efa fantatsika, kalitao mifanohitra amin'ny habetsahana. Heverinay fa hanohy amin'ny lalana iray ihany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Seho an'i Oprah sy ny fahitalavitra Apple TV tamin'ny taona 1971